जुनसुकै पुरुषलाई आकर्षित गर्ने क्षमता हुन्छ यस्ता युवतीहरुमा ! - Sacho Post
जुनसुकै पुरुषलाई आकर्षित गर्ने क्षमता हुन्छ यस्ता युवतीहरुमा !
२०७८ आश्विन ९, शनिबार १०:१७ बजे
ज्योतिष शास्त्रलाई विश्वास गर्ने हो भने केही राशि भएका युवतीहरुमा विशेष गुण हुन्छ ।
उनीहरु आफ्नो राशिको प्रभावले जो सुकै पुरुषलाई पनि पगाल्न सक्छन् ।
मिथुन राशि भएका युवतीहरुको तुलना अप्सरासँग गरिन्छ । जसले जोसुकैलाई आकर्षित गर्न सक्छन् । सुन्दरताबाहेक यी राशि भएका युवतीमा यस्ता थुप्रै गुण हुन्छ जसले पुरुषलाई आकर्षित गर्छन् । उनीहसँग धेरै उमेरसम्म जवान देखिने क्षमता पनि हुन्छ ।
मकर राशि मकर राशि भएका व्यक्ति धेरै रोमान्टिक मानिन्छन्। आफ्नो पार्टनरलाई सरप्राइज दिन उनीहरुलाई विशेष ज्ञान हुन्छ। उनीहरु अचानक खुसी बनाउन पनि माहिर हुन्छन्। मकर राशि भएका व्यक्ति धेरै ‘क्यूट’ र रोमान्टिक व्यक्तित्वको हुन्छन्। जसकारण पनि केटीले यस्ता राशि भएका पुरुषलाई मन पराउँछन्।
निःसन्तान हुनुहुन्छ ? यस्तो छ घरेलु उपचार
दशैको मुखमा काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ नियम, यी काम गर्न प्रतिबन्ध